आहा! काठमाडौं :: Setopati
आज बिहान लैनचौरको बाटोहुँदै हरिहर भवनस्थित कार्यालय आउँदा माइक्रोको कोचाकोच बिच बाहिर झ्यालबाट चिहाएको अर्कै मुलुकमा आएजस्तो लाग्यो।
सडक छेउछाउ पुललगायत बाटोघाटोमा रंग पोतिएका छन्। सयपत्रीलगायत विभिन्न फूलहरू ढकमक्‍क फुलेका छन्। बाटो चिटिक्क पारिएको छ।
साच्चिकै के यो हिजोको काठमाडौं हो त? म झल्यास्स भएँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदैछन्, त्यही भएर होला सडक आकर्षक देखाउन रंग पोतिएको।
आखिर कसका लागि हो? प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जुन सडक भएर जाने कार्यक्रम रहेको छ त्यही सडकमा मात्र मर्मत सम्भार हुँदै रै’छ, वर्षायाममा विजोगले जमेकाका पानीका खाडलहरु पुरिदैछ।
नाममात्रको कालोपत्र गरिएको छ केवल हात्तिका दात जस्तै गरी देखाउने पाराले। हामीले धुवाँधुलो दिनहुँ खाइरहेका छौं, पानी पर्‍यो भने काठमाडौंमा हरिविजोगनै हुन्छ। सास्ती र दुःख कति व्यहोर्नुपर्छ, त्यो त जून र घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
नेपाली जनताले विकासको अनुभूती भनेको केवल कुनै विदेशी मुलुकका विशिष्ट ब्यक्तित्व आउने कार्यक्रम भए मात्रै हुने हो। यहाँको स्वरुप रातारात फेरिन थाल्छ। फुङ्ग उडेको काठमाडौं माथि छोटो समयावधिको लागि भए पनि रङ्गरोगन र गमलामा सारेका फूलहरू रातारात फुलाउने प्रयास गरिन्छ।
मलाई लाग्छ यो त केवल बजेटको दुरूपयोग मात्र हो। के हामी दुरदर्शी रुपमा लामो समयसम्म टिकिराख्ने गरी काठमाडौंलाई विकासको गति दिन सक्दैनौं?
माथिल्लो ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरू भन्‍ने गर्छन्- हामी नेपालमा रेल ल्याउँछौं, हावाबाट बिजुली निकाल्छौं, जनतालाई सुखको अनुभूती दिलाई देशलाई एउटा समृद्ब र विकशित राष्ट्र बनाउँछौं। जनताका माझमा आफूले गरेका वाचा पुरा गर्न काम गर्न त शुरु गर्नुपर्छ नी।
त्यसै कुरो मात्रै गरेर जनतालाई झुक्याउने काम आखिर कहिले सम्म? हामी जनता पनि उस्तै छौ जस्तो कुरा पनि सजलै पत्याउँछौं। जनतालाई सपना ठूलाठूला बाँड्ने कामको सुरुवात शून्य गतिमा, अनि विकासको अनुभूती जनताले कसरी महसुस गर्लान्? जेहोस् नेपालमा कम्तीमा पनि वर्षमा १ पटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजस्ता बिशिष्ट ब्यक्तित्व आइदिउन्। त्यो पनि २/४ जनाले ७७ वटै जिल्लाको भ्रमण गर्ने व्यवस्था गराएमा मुलुककै मुहार फेरिन्थ्यो कि!
जे होस् छोटो समयमा र समयका लागि भए पनि यहाँका सडक कालोपत्रे भएका छन्। रंग पोतेर चिटिक्‍क पारिएको छ। सडकका दुबै किनारामा फूलहरू ढकमक्क फुलाइएको छ।
हरीयाली सफासुग्गर काठमाडौं भन्न पाएका छौ। आहा! सुन्दर काठमाडौं।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २७, २०७५, ०९:४२:३८